Isiqinisekiso - iShandong OBeer Machinery Equipment Co., Ltd.
Isixhobo sokwenza imveliso kunye nokuthumela imveliso ngaphandle
Iphepha-mvume loShishino: Iphepha-mvume loShishino lwezixhobo zokupheka ibhiya, iinxalenye zotywala kunye nezixhobo ezinxulumene nokuvelisa kunye nokuthengisa. Sisatifikethi sokuba semthethweni kweli shishini.
Icandelo 2: Certification Umgangatho
Kunye imveliso imveliso kunye nolawulo lomgangatho ophezulu, Obeer oomatshini ifumene i ISO 9001 kunye eYurophu CE isatifikethi. Ngeli xesha, sinako ukuyila iphaneli yokulawula yi-ul yase-USA esemgangathweni kunye ne-CSA yomgangatho waseCanada.
Imigangatho ibonelela ngesikhokelo kunye nezixhobo kwiinkampani nakwimibutho efuna ukuqinisekisa ukuba iimveliso kunye neenkonzo zazo zihlala zihlangabezana neemfuno zabathengi, kwaye umgangatho uphuculwa ngokungaguquguqukiyo.